(14-04-2018) - Olana goavana ho an’ny mpamboly lavanilina eo anivon’ny faritra atsinanana sy ny faritra analanjirofo, ny firongatry ny halatra am-potony azy ireny ka mahatonga ireo tantsaha tompony misangotra ny fananany mialoha ny fotoana mba tsy hisian’ny fatiantoka amin’izy ireo.
Tsy mbola fotoam-piotazana lavanilina anefa izao, ka na tompony misangotra azy mialoha, na ireo mpangalatra am-potony, dia samy enjehin’ny lalana avokoa, hoy Atoa Felix Menarivo, filohan’ny “Plate forme” ny lavanilina eto Toamasina, satria 9 volana vao tena matoy tsara ny lavanilina, ary mahazo ny fenitra “01” amin’ny tahan’ny “vanilines” ao aminy amin’izany. Koa izay tratra dia potehina sy dorana avy hatrany eo imason’ny tompony sy ny solon-tenan’ny “Plate forme” ny lavanilina, ary ny solon-tenam-panjakana, ahitana ny eo anivon’ny varotra sy ny faritra atsinanana.
Tranga iray no niseho tao Ampasimbe Onibe nahatrarana ity ramatoa iray mpamboly lavanilina, nefa noho ny fangalaran’ny olona ny lavanilina teny an-tsaha dia nosangoriny mba tsy hiteraka fatiantoka ho azy nyambiny, kanjoizao izy tratran’ny zandary Toamasina izao noho ny fiaraha-miasan’izy ireo tamin’ny fokonolona tao Ampasimbe Onibe. Nandrahoana tao anaty tavoahangy, natao fomba meksikana mikarakara lavanilina no nanaovanyazy, nefa amin’ny maha-tompony azy dia fihainoana azy sy fandorana ny lavanilina tratra ary fandoavana lamandy no sazy azon’ity ramatoa ity teo anivon’nyzandary. Ankoatra izay, araka ny fanazavan’ilay ramatoa, dia tsy mahalala ny lalana mifandraika amin’ny fambolena sy fiotazana lavanilina nytenany. Ny taona 2003 izy no namboly izany ka tamin’ity taona ity vao mikasa ny hoity ny vokatra voalohany, nefa izao tratran’ny olana izao. Manana fototra manodidina ny 50 izy ka namokatra manodidina ny 06kgs hatramin’ny 10kgs eo ny fototra iray, nefa io 10kgs nosangoriny nananany olana io sisa ny ambiny tamin’izany vokatra lavanilina novoleny tao anatin’izany.